Ny fitomboan'ny fizahan-tany eo anelanelan'ny Azerbaijan sy Bulgaria dia nitombo tokoa
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fitomboan'ny fizahan-tany eo anelanelan'ny Azerbaijan sy Bulgaria dia nitombo tokoa
Azerbaijan sy Bulgaria dia maniry ny hanitatra ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra rehetra, anisan'izany ny fizahan-tany, hoy i Nikolay Yankov, masoivohon'i Bulgaria ao Azerbaijan, tamin'ny Trend Publication tamin'ny resadresaka nifanaovana vao haingana.
Nilaza ny masoivoho fa nitombo be ny fizotran'ireo mpizahatany teo anelanelan'i Azerbaijan sy Bulgaria tamin'ny fanombohana ny sidina Baku mankany Sofia tsy miato.
"Ny isan'ny visa navoaka ho an'ny olom-pirenena Azerbaijan dia nitombo farafahakeliny 40 isan-jato hatramin'ny nisokafan'ny sidina, ary mino izahay fa amin'ity taona ity dia hitohy ny fironana tsara aorian'ny fisokafan'ny sidina mahazatra amin'ny lohataona," hoy izy.
Notsipihin'ny masoivoho fa ny tanjona dia ny hanome valiny izay hita misimisy kokoa ho an'ny olom-pirenena Bulgaria sy Azerbaijan.
"Ankehitriny, misy fotoana bebe kokoa ahafahan'ny fifandraisana akaiky eo amin'ny firenentsika sy ny fifandraisana matanjaka kokoa eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha, ny fifandraisana ara-toekarena mavitrika kokoa," hoy i Yankov nanamafy.
Ankoatr'izay, mikasika ny fanatsorana ny fitondrana visa eo amin'ireo firenena, nilaza ny masoivoho fa tsy mametraka lalàna visa iraisana amin'ny firenena hafa i Bulgaria, fa kosa manaraka ny politikan'ny EU manoloana izany.
"Ny masoivohontsika dia miasa araky ny fifanarahana teo amin'ny Vondrona Eropeana sy Azerbaijan momba ny fanamorana ny famoahana visa [ny tanjon'ny fifanarahana, izay nanomboka ny 1 septambra 2014, dia ny hanamora, amin'ny alàlan'ny fifandimbiasana, ny famoahana visa ho an'ny fiasana kasaina hatao tsy mihoatra ny 90 andro isaky ny 180 andro ho an'ny mponina ao amin'ny EU sy Azerbaijan].
Ny faritra consular ao amin'ny ambasady dia miasa hatrany amin'ny fahafahany feno mba hanomezana valiny haingana ny zavatra takian'ny mpangataka visa ary ezahany hiroso amin'ny fangatahana visa amin'ny fotoana fohy indrindra.
Mpiasa amin'ny fisakafoanana any Nepal no mihevitra ny fitokonana
Fampitandremana WTTC Brexit: asa fizahan-tany fitsangatsanganana 700.000 atahorana any Eropa